वोमी लघुवित्तको आकर्षक प्रगति, रिजर्भमा ११०.८७% को छलाङ Bizshala -
कोरोनाविरुद्धको खोप सन् २०२१ को सुरुआतमै आउँछ : चिनियाँ कम्पनी
सिरहाको गोलबजारमा महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा
कोरियाले ईपीएस नियममा सुधार गर्दै, कानुन संशोधनको तयारी
असोज ११ बाट जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ, कति कित्ताका लागि दिने आवेदन ?
वोमी लघुवित्तको आकर्षक प्रगति, रिजर्भमा ११०.८७% को छलाङ
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वित्तीय सूचकमा आकर्षक प्रगति गरेको छ ।
दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले खुद नाफा ५८.५१ प्रतिशतले बढाउँदै ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
संस्थाले सञ्चालन मुनाफाबापत ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ कमाएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा ४ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो।
समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
दोस्रो त्रैमासमा संस्थाले ७८ करोड १६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
संस्थाले रिजर्भको आकार ११०.८७ प्रतिशतले बढाएको छ । गत वर्ष ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको रिजर्भमा समीक्षा अवधिमा बढेर १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा संस्थाको चुक्तापुँजी २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको चुक्तापुँजी १० करोड १० लाख रुपैयाँ थियो ।
वार्षिकीकृत संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २७.४६ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ३४.४५ रहेको छ ।
womi micro-finance Q2 2076/77
यूनाइटेड फाइनान्सका अध्यक्ष भन्छन्–‘नवीलसँग मर्जमा जाने संभावना नकार्न सकिन्न’
धर्तीमा सुनका खानीहरु रित्तिनै लागेका हुन् त ? अब कति बाँकी होला ?
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ऋणी ग्राहकलाई ब्याज रकममा १२% छुट
मोफसलका लगानीकर्ताहरुको गुनासो– ‘ब्रोकरहरुमा केवाईसी अपेडट गर्न किन ढिलाइ ?’
भदौ २५ र २८ गते सवा २ बजेअघिको धितोपत्र किनबेचको राफसाफ आज हुँदै
सुनको भाउमा लगातारको गिरावटमा ब्रेक, आज बढ्यो
एनआरएन लघुवित्तको बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । एफपीओ निष्कासनको मुख्य अजेन्डासहित एनआरएन लघुवित्त...
आजबाट समीट र सजिलो लघुवित्तको एकीकृत कारोबार सुरु
काठमाण्डौ । आपसमा गाभिएका समीट लघुवित्त र सजिलो लघुवित्त वित्तीय...
असोज २८ मा नाडेपको वार्षिक साधारणसभा, लाभांश पारितसहित यस्ता
काठमाण्डौ । लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित नाडेप लघुवित्त वित्तीय...
एफपीओ निष्कासनको मुख्य अजेन्डासहित एनआरएन लघुवित्तले डाक्यो
काठमाण्डौ । एफपीओ निष्कासनको प्रमुख अजेन्डासहित एनआरएन लघुवित्त...
असोज ६ बाट समीट र सजिलो लघुवित्तको एकीकृत कारोबार
“सिटी एक्स्प्रेस गल्बन्दी टिक–टक च्यालेन्ज” हुँदै,प्रथम
काठमाण्डौ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरले देश बिदेशमा रहनु भएका...
नेपाल फाइनान्सको स्थगित वार्षिक साधारणसभा अब असोज १० मा हुने,
काठमाण्डौ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी...
नयाँ नेपाल र सारथि लघुवित्तको एकीकृत कारोबार असोज ५ बाट
काठमाण्डौ । आपसमा गाभिएका नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथि लघुवित्त...